ဗုဒ္ဓဟူး, ၁၉ ဇွန် ၂၀၁၃	Mizzima Burmese
Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို နေ့စဉ် သတင်းစာ မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > စီးပွားရေး
စားအုန်းဆီ တန်ချိန် သုံးသိန်း ရှစ်သောင်းခန့် တင်သွင်းရန် လိုင်စင်ထုတ်ပေးပြီးဖြစ်	တနင်္လာနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၅ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၂၁ နာရီ ၀၄ မိနစ်	ခင်မျိုးသွယ်	ပြည်တွင်း စားသုံးဆီ လုံလောက်မှုမရှိ၍ ပြည်ပနိုင်ငံများမှ တင်သွင်းခွင့် ပြုထားရာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှ ...
မြန်မာ့ သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ တင်ပို့မှု ခေတ္တရပ်ခြင်းက ထိုင်းလျှပ်စစ် ဖူလုံမှုအား စိန်ခေါ်နေ	သောကြာနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၂ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၇ နာရီ ၀၇ မိနစ်	ဟင်္သာနီ (မွန်မြေ)	မြန်မာ့ ကမ်းလွန် ပင်လယ်ပြင်ရှိ ရတနာနှင့် ရဲတံခွန် ဓါတ်ငွေ့ လုပ်ကွက် နှစ်ခုကို ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့မှ ၁၃ ရက်နေ့အထိ နှစ်စဉ်ပြုနေကျ ...
ပြည်တွင်း ရွှေဈေး အနည်းငယ်တက်၊ ပြည်ပ ရွှေများ ဈေးကွက်သို့ အ၀င်ရှိ	အင်္ဂါနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၉ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၄၅ မိနစ်	ခင်မျိူးသွယ်	ကမ္ဘာ့ ရွှေဈေးအနည်းငယ် ပြန်တက်လာကာ ပြည်တွင်းရွှေဈေးလည်း အနည်းငယ် ...
ကားပွဲစားတန်း ရွှေ့ပြောင်းရာတွင် ကားများထားသိုရန် အခက်အခဲ ဖြစ်နိုင်	တနင်္လာနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၈ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၁၀ မိနစ်	စောဇင်ညီ	ရန်ကုန်တိုင်း၊ ကမာရွတ်နှင့်စမ်းချောင်းမြို့နယ် ဟံသာဝတီ ကားပွဲစားတန်း ရွှေ့ပြောင်းရာ တွင် နေရာသစ်ဖြစ်သည့် ...
လေကြောင်းမှ ကဏန်းများတင်ပို့မှု အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၃သန်းခန့်အထိ ရှိလာ	ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၃ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၅ နာရီ ၀၉ မိနစ်	ခင်မျိူးသွယ်	မြန်မာနိုင်ငံက ဖမ်းဆီးရရှိသော ကဏန်းများကို လေကြောင်းလိုင်းကပါ တင်ပို့ရောင်းချလျှက်ရှိရာ ယခု ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ဖေဖေါ်ဝါရီ ၃ရက်နေ့အထိ ...
ထားဝယ် အထူးစီးပွားရေဇုန်အနီး ဥယျာဉ်ခြံမြေကွက်များ အ၀ယ်လိုက်	တနင်္လာနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၁ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၆ နာရီ ၃၄ မိနစ်	ခင်မျိူးသွယ်	ထားဝယ် အထူးစီးပွားရေးဇုန်အနီး ကျေးရွာများရှိ ဥယျာဉ်ခြံမြေကွက်များ အမြင့်ဈေးဖြင့် အ၀ယ်လိုက်နေကြောင်း ...
မလေး ၊စင်ကာပူ ၊တရုတ်တို့က ကဏန်းပျော့ကို အဓိက၀ယ်ယူမှုရှိနေ	စနေနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၀၉ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၃ နာရီ ၁၆ မိနစ်	ခင်မျိုးသွယ်	မြန်မာနိုင်ငံက ထုတ်လုပ် တင်ပို့ ရောင်းချလျှက် ရှိနေသော ကဏန်းပျော့များကို .....
ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် ADB ကူညီမည်	သောကြာနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၀၈ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၀၈ မိနစ်	ခင်မျိူးသွယ်	မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြစ်ကြီး သုံးစင်း မှ ရေချိုများအား အကျိုးရှိစွာ အသုံးချနိုင်ရေးနှင်ရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် ....
ကိုးလတာအတွင်း နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းခုနှစ်ရာကျော်ရှိလာ	သောကြာနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၀၈ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၆ နာရီ ၀၄ မိနစ်	ခင်မျိူးသွယ်	၂၀၁၂ -၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်၏ ကိုးလတာ ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးကဏ္ဍ မျိုးစုံတွင် ပြည်ပနိုင်ငံများက ........
ဒဂုံအရှေ့မြေကွက်များနှင့် သီလဝါ မြေကွက်များ အရောင်းအ၀ယ်ပြန်လိုက်နေ	ကြာသပတေးနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၀၇ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၅၅ မိနစ်	ခင်မျိူးသွယ်	ရန်ကုန် အိမ်ခြံမြေ ဈေးကွက်အတွင်းရှိ ဒဂုံအရှေ့မြေကွက်များနှင့် သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်နှင့် ဆက်စပ်မြေကွက်များ အရောင်းအ၀ယ် ပြန်လိုက်လာကြောင်း ......
« ရှေ့ဆုံးမျက်နှာသို့ ရှေ့တမျက်နှာသို့ 1234567 8910 နောက်တမျက်နှာသို့ နောက်ဆုံးမျက်နှာသို့ »	စာမျက်နှာ 8 စုစုပေါင်း 39	နောက်ဆုံးဆောင်းပါးများ
ပေါက်တူးကိုင်တဲ့လက်တွေ ဖုန်းတွေ ကိုင်နိုင်စေ
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာ အသိမ်းခံရတဲ့ လယ်မြေဧက သိန်းချီရှိနေတယ်
အမျိုးသမီးငယ်များ ပညာသင်ကြားပေးရေးသည်လည်း အခရာကျသည်
www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved